လူမျိုးရေးပြဿနာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူမျိုးရေးပြဿနာ
Posted by လင်းဝေ on Jun 7, 2012 in Creative Writing, Critic | 11 comments
လူမျိုးရေး ပြဿနာတွေ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်အချိန်က စတင်ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသလဲ။
မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်မှာ ဖြစ်ပြီလား။ ဦးပိန်တံတား ဆောက်တဲ့ မြို့စာရေးမောင်ပိန် က ဘာလူမျိုးလဲ သိသူများ ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်။ သူ့ဆရာကတော့ လူမျိုးခြားမှန်းသိပါတယ်။ ကုန်းဘောင်ရှာပုံတော်ထဲမှာတော့ တင်တင်စီးစီးနာမည်ပဲတွေ့တယ်။ ဘိုင်ဆပ်တဲ့။ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စတော့ ရှိနေပါပြီလို့ပြောရပေမယ့် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ဘာတွေဖြစ်လောက်အောင် အရေအတွက်မများသေးဘူးထင်ပါတယ်။
နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်း အဲဒီအချိန်အထိ ပန်းဝါ တို့ စစ်တကောင်း တို့ဆိုတာ မြန်မာဘုရင့် အာဏာစက်အောက်က နယ်မြေတွေပါ။ စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလ သွားတိုက်ရတဲ့ “ပန်းဝါ” တိုက်ပွဲ ဆိုတာ အဲဒီ အခု“ကော့က်ဘဇား” ပေါ့။ သိန်းဖေမြင့် ရဲ့ စစ်အတွင်း ခရီးသည် စာအုပ်မှာလည်း သူတို့ ရခိုင်ကိုကျော်ပြီး အိန္ဒိယ(အခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) ထဲ ဝင်သွားတော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအနွယ် “မရမာကြီး” လူမျိုးတွေ အများအပြားနေထိုင်ကြောင်းလည်း ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ အိန္ဒိယ ဘက်ကနေပြီး လယ်ကူလီ လုပ်ဖို့ ကနေ လိုအပ်တဲ့ လုပ်သားအင်အား သုံးဖို့အတွက် မူဆလင်ကော ဟိန္ဒူကော ဘာကော ညာကော ခေါ်သွင်းလာခဲ့ပြီးနောက်မှာ မြန်မာပြည် ကို လူမျိုးရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်စေခဲ့တော့တာပါပဲ။ အိန္ဒိယ ဘက်ကတင်မဟုတ်ပဲ တရုပ်တွေကိုလည်း သွင်းခဲ့တာပါပဲ။ အခုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ထစ်ကနဲ ဆိုရင် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်နိုင်ချေတွေက များနေပြီ။
အခြား အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီအနီးနားက မလေးရှားမှာလိုပဲ လူမျိုးရေး ပြဿနာတွေ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်က မလေးရှားလို မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေမဟုတ်တာရယ်။ မလေးတွေက တရုပ်တွေကို စကာင်္ပူကို အပိုင်ပေးလိုက်ရသလို အပိုင်စီးခံလိုက်ရသလိုဖြစ်တာလည်း ငြိမ်ခံနေပေမယ့် မြန်မာတွေကတော့ ငြိမ်ခံနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စတွေ အားလုံးရဲ့အစဟာ အင်္ဂလိပ်တွေကျုးကျော်မှုပါ။ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားတွေကို အခြားသူရဲ့နယ်မြေထဲ သွင်းခေါ်လာတဲ့အတွက်ဖြစ်ကြရတာပါ။ လူမျိုးရေးအရ မြန်မာနိုင်ငံက မူရင်းနေ တိုင်းရင်းသားတွေ နဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်တဲ့ မူဆလင်ဘာသာဝင် ပါကစ္စတန်၊အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလား (အဲဒီတုန်းကတော့ အိန္ဒိယ တစ်ခုတည်းပေါ့) က သူတွေကို ခေါ်သွင်းလာလို့ပါပဲ။ အခုပြဿနာတွေ တက်နေပြီ ကဲ… ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ အင်္ဂလန်မှာ ခိုလှုံခွင့်ပေးနိုင်မလား။ ခိုလှုံခွင့်ပေးလို့ကတော့ အလုံးအရင်းနဲ့ သွားကြမှာပဲ။ အင်္ဂလန်မှာ မပေးတောင် ဖောက်ကလန်မှာ ခိုလှုံခွင့်ပေးလိုက်ကြပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကနေဒါဆိုလည်း သွားကြမှာပါ။ အော်ဇီပေါ့ သွားနေကြပါစေ။ သူတို့ကျုးကျော်မှုအတွက် သူတို့ဘာများပြန်ပေးဆပ်နိုင်ပါမလဲ အခုနေမှာ။ နယ်နမိတ်ပြဿနာတွေမှာလည်း သူတို့လုပ်သွားပြီး အခုတော့ ငြိမ်နေတာမျိုးတွေ။ အံတီစု အင်္ဂလန်သွားရင် ဒီအကြောင်းလေးဆွေးနွေးပေးမလားမသိဘူး။
ကမ္ဘာရွာကြီးလို့ ကွဲထွက်မတတ်အော်နေကြပြီးမှ ဘာကြောင့် အခုလိုလူမျုိးရေးတွေကိုရှေ့တန်းတင်တယ်မသိဘူး
ကားဈေးတွေကျ တော့ ဝမ်းသာနေတာ….
စိတ်ညစ်စရာတွေက တနင့်တပိုးကြီး တက်လာတယ်…….
အပျက်ပျက်နဲ့ နှခေါင်းသွေးထွက်ကြရတော့မှာ စိုးသဗျာ…..။
မည်သည့်ဘာသာမဆို မျက်လုံးမှိတ်ပြီး မကိုးကွယ်ပါနှင့်ဘာသာဆိုတာ ယုံကြည်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် ဘာသာပြောင်းတိုင်း လူမျိုးပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်နေသမျှ ဒို့ဗမာတွေအလိမ်ခံနေရမှာပါ။(Burma=Myanmar)
သမိုင်းကြောင်းကိုပြောရင် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးစစ်ရဲ့လါး ရှက်ရပါတယ်၊ အရီးကြီးခေတ်လေ……………..
ကျတော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဘာသာစုံ၊ လူမျိုးစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှု စုံလင် စွာနဲ့ အေးချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။
အခုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို တရားဥပဒေကြောင်းအရ တရားမျှတစွာ ဖြေရှင်းရမည့်ကိစ္စများသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်တလော ရခိုင်ဘက်က ပဋိပက္ခတွေကို လူမျိုးရေးပြဿနာ လို့ ယူဆကိုင်တွယ်နေရင်တော့ဖြင့်
နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်အဟုန်များကို ရပ်တန့်သွား စေနိုင်တယ်နော်။
မှာ စတင်လာခဲ့တာအန္ဒိယကလာတဲ့လူတွေဘဲ ၊ဘယ်ဘာသာဘယ်မှပွင့်သလဲသေသေချာချာစုံစမ်းပါ၊သူခိုး
ခွေးမျိုးကုလားဝင်ဟောင်မနေနဲ. သတ္တိတကယ်ရှိရင် ဒီ Page ကိုတတ်လာခဲ့ https://www.facebook.com/groups/317245441685142/…………..
မအေးလိုး ကုလားရှိခိုးနေရတဲ့အကောင်captainamerica ရေ မင်းသတ္တိရှိရင်လာခဲ့ပါကွာ
ပြော “ကလီး” ဘယ်ကိုလာရမလဲ အွန်လိုင်းထဲမှာလား အပြင်မှာလား ကြိုက်တာပြော………
ကဲ ကဲ တော်ကြပါတော့ ဆရာတို့ရေ။
ဒီပို့စ်ကလည်း ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းရေးထားတဲ့ ပိုစ်တစ်ပုဒ် မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ယောက်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို လည်း တစ်ယောက်က စော်ကားတာမျိုး မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ။
ဆရာ mical chan အနေနဲ့လည်း
လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေ၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်စေမယ့် ကွန်းမန့်တွေ မပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အားလုံး မဆဲကြဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒီကောင်တွေအကဲပိုလွန်းလို.ပါ ကိုချော ပုံမှန်အားဖြင့်အေးဆေးပါပဲ။အခုဟာကသူတို.
ပြောတာတွေက တစ်ခုမှလည်းဘောင်မဝင် လာလည်းရိုင်းသေး ရွာသမိုင်းကြောင်းကို
နားမလည် ကြောင်တောင်တောင်တွေလာလုပ်နေလို.ပါ။သူတို.စလို.ပြောမိတာ။ မရင့်ကျက်
ကိုလင်းဝေရဲ့ ဒီပိုစ့်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန်ဆွေးနွေးချင်ပေမယ့်
အခုအခြေအနေအရ နဲနဲပဲ တို့ နိုင်ပါတော့မယ်…။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ မဟာမိတ်တွေလဲ လုံးလုံးလျှားလျှား စစ်နိုင်ထားတဲ့နောက်တော့-
ဂျူးတွေကို သူ့အိမ်သူပြန်ခိုင်းလိုက်ရင် – ရော်ကြေးတွေ ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ပေးပြီးကူညီလိုက်ရင်
ဒီကမ္ဘာကြီး အခုလို ဘယ်ဖြစ်နေမှာလဲ….။
အင်အားကြီးသူတွေက သိသိကြီးနဲ့ကို နိုင်လိုမင်းထက်လုပ်ပြီး မီးမွှေးသွားတာလို့ပဲ မြင်မိပါတော့တယ်။